Eyona Hiking Qala Amanqaku Aseyurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Eyona Hiking Qala Amanqaku Aseyurophu
Ukubiza zonke iijunkies ze-adventure kunye nabafunayo! Ngaba ufuna ukwazi ukuba zeziphi iindawo eziphambili zokunyuka intaba kunye nendlela yokufika ngololiwe? Ngoko endaweni eyiyo!
BEST NUMBER bentaba START: EZINTLANU Terre LONXWEME Trail - ITALY
Onyuka Cinque Terre yenye yezona zinto zibalulekileyo ukuyenza Italy, kwaye enye Best amanqaku nokunyuka ekuqaleni. ezityhutyhayo zayo ukunyuka intaba ziphakathi kakhulu zintle eYurophu ukuba ungumntu othanda phandle okanye umntu nje ofuna ukwenza phakathi waseKorinte izidlo Italian, yenye yeendlela ezivuyisayo zokonwabela i-Itali unxweme olunomtsalane.
Kodwa xa kumnandi i Cinque Terre kufuneka ukuba beze bezilungiselele. Ukusuka ukuqonda iingxaki phunga ukupakisha izinto ekunene kwaye zihamba ngexesha elichanekileyo lonyaka, ukuba unolwazi kakuhle uya kwenza umahluko phakathi uhambo ubomi babo kunye yokusebenza ufunda kuyawuqoba.
Indlela ukufika khona Train:
• Kanye in Italy, ngoncedo Save A Isitimela, uloliwe lo iseyeyonanto ibhetele ukufikelela Cinque Terre. Kukho uloliwe lendawo, i Cinque Terre Express uloliwe, esiqala ngaselunxwemeni phakathi izitishi Centrale of La Spezia and Levanto. Ime kuyo yonke imizi emihlanu (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), kwaye kufuneka athathe ngayo ukuhamba phakathi kwabo kanye ukuba kule ndawo (ngaphandle kokuba ukhethe ukuba sihamba neendledlana nasoloko umngeni). Njengoko kwehlobo 2016, iindleko Cinque Terre Express € 4 uhambo ngamnye. Ngexesha off-lonyaka, ngokuqhelekileyo ukususela kuNovemba ukuya kuMatshi, iindleko kusithwa € 1,80. Lo loliwe linganiki yokuhlala Reserved.
• Ukufika uFlorence okanye eRoma: Kukho eziqeqesha ezimbalwa ngqo ngosuku ukususela Firenze Santa Maria isikhululo Novella ku La Spezia Centrale; eminye ifuna ukuba utshintshe oololiwe e Pisa. Amanani aqala ngo € 13,50. E La Spezia, kutshintsha Cinque Terre Express.
UFlorence Levanto Uqeqesha
UFlorence La Spezia Uqeqesha
ERoma La Spezia Uqeqesha
BEST NUMBER bentaba START: Iinkozi HAMBA - Austria
the Eagle Walk yenziwa nge 23 izigaba ezinxulumene, leyo zilandela umzila umoya-uthatha nge Tirol. The Best ukunyuka intaba isiqalo iingongoma kwingingqi, iisection ezininzi zinakho lula zingafumaneka ngemoto cable kwaye kwagqitywa njenge ngokupheleleyo- okanye isiqingatha sosuku tour. Singathanda ukuba ukwazisa wena kwicandelo lethu ndiyithandayo kule blog.
Enoba ukuba uceba uhambo imini okanye adventure multi-veki kwi ezintabeni, uya kufumana i Eagle Walk ukuba ibe nkulu amava ngaphandle. It inika amathuba nanto ukuhlola, amava, nokuxhuma nendalo.
Pick yethu Top: Lake Zireiner See
Ukuhamba kangangesiqingatha-semini sabakhenkethi maxa wambi. Ukususela Kramsach kwi Lower Inn Valley, thatha i lift nosihlalo ukuze indlu Sonnwendjoch. A ukuhambahamba kukhokelela akuQaqa Zireiner echibini, mijelo leyo imi kwintlambo phantse iimitha-1,800 ngentla komgangatho wolwandle - indawo enkulu laphola kwi eshushu ihlobo iinyanga. Bohambo iyaqhubeka Zireiner LM edlelweni (1,698m) ngaphambi kokuba abuyele ngaphakathi phezulu lift kwesitulo, ukuvumela ukuba ukukhwela umva wehla waya Inn Valley.
It’s easy to zokuhamba from the UK to Austria ngololiwe. Ungakwazi ukuya ku London eVienna, ISalzburg okanye i-Innsbruck ngosuku olunye ngo -High speed ngololiwe. Okanye uthathe i sasemini Eurostar ukusuka eLondon ukuya eBrussels, a Thalys high-speed uloliwe ukuba Cologne, kunye Nightjet esihle olele train ku Innsbruck, Linz, okanye Vienna ubusuku. kanye apho, siya Tirol kulula kunye nomnatha wayo olubanzi zoluntu izithuthi. Kulula ukuba ukujikeleza mmandla usebenzisa oololiwe. Abahambi ngeenyawo abanqwenela ukuba bathathe inxaxheba okanye yonke Eagle Walk angafikelela ukuqala nokugqiba iingongoma kwinqanaba ngalinye ngokusebenzisa izithuthi zikawonke lendawo.
Cologne eVienna Uqeqesha
BEST NUMBER bentaba START: CAMINO DE SANTIAGO – SPAIN
I Camino uyaziwa IsiNgesi njengoko iNdlela St James. All Camino pilgrimage routes lead to Santiago de Compostela as this is where the remains of St James, (Santiago), esafunyanwa ngenkulungwane yesithoba. The pilgrimage was popular in the 10th, 11th, kunye nekhulu le-12 emva koko yehla ngokuthe ngcembe ekuthandeni.
Kwinkulungwane yama-20, phantse akukho mntu uhamba naziphi na iindlela. Then in the late 1970’s and early 1980’s the route became of interest to a few. They began to write and imephu nemizila kwakhona.
Kwinkulungwane yama-21, ingcamango lokuphambukela mhlawumbi elidala. kunjalo, Uhambo lokuhamba inyanga nenyanga kwaye unqanyulwe kwizixhobo zale mihla kukhulula kakhulu.
Sarria yeyona dolophu lithandwa ngezonqulo njengoko kwinqanaba apho liqalise Camino de Santiago. Angaphezulu 300,000 balundwendwe emhla koko banduluke Santiago de Compostela ngo 2017, ezithile 60% wayekhethe ukulandela Camino Frances. Kwaye ngaphezu 80,000 kubo wakhetha Sarria njengesiqalo lwabo. Esona sizathu sokukhetha iSarria kukuba ibonelela ngomgama omncinci ofunekayo kubahambi ukuba banikwe iCompostela (isiqinisekiso owayehambele). Umgama eSantiago nga kuhlawulwa ngezigaba nje emihlanu kwaye inama inani elikhulu ongakhetha yokuhlala kunye neenkonzo abalambele. Sarria kulula ukuya kwizithuthi zikawonke ukusuka iindawo ezahlukeneyo Spain.
Indlela ukufika Sarria ngololiwe:
Lo loliwe yenye yezinto ezininzi ukhululekile ongakhetha ukuba uhamba ukusuka Madrid ukuya Sarria. Kukho ngqo uqhagamshelo ukuba ushiya isikhululo sikaloliwe Chamartin Madrid kabini ngosuku, nge uhambo ixesha malunga ezintandathu iiyure. Ngaphezu, kukho oololiwe ezahlukeneyo adibanayo Madrid kunye Santiago de Compostela and Lugo, izixeko Galician apho kulula kakhulu ukufumana ku Sarria, ihlangene eziliqela ngqo yonke imihla. Uyakwazi ukudibana onke amaxesha kunye ezitsho ngokuqhagamshelana Renfe, inkampani Uloliwe kazwelonke Spain kaThixo.
Lo loliwe nayo ukhetho zingcono xa uhamba e Barcelona. Kukho unxibelelwano ngemihla ngqo kwi Barcelona (okanye ukutshintsha kwi Monforte de LEMOS), kunye koololiwe emini (ukuba bahlanganise Ave okanye-high speed ngololiwe Umgama omde ongakhetha) kunye noololiwe yokulala. I-avareji Ixesha Uhambo e Barcelona kuyinto 12 iiyure. Lo loliwe ukusuka Barcelona ukuya Sarria kwakhona idibanisa kunye nezinye iidolophu ezinkulu kuquka Tarragona, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, uLeon.
Ukusuka Santiago de Compostela, Renfe inika oololiwe ezimbini ngosuku ku Sarria: elinye 5 pm (iiyure ezimbini 'ixesha uhambo); yaye 6.07 pm (ngexesha uhambo phantse ezine iiyure).
ukusuka Lugo, i uloliwe is also the most comfortable option. Renfe inika uxhulumaniso ezininzi mihla le eziya kukunceda ukuba Sarria ukusuka Lugo ngo 30 imizuzu.
BEST NUMBER bentaba START: WESTWEG Trail - JEMANI
Kunokuthiwa ukuba trail Westweg imvelaphi zonke bentaba-elide umgama German. Yaba indlela yokuqala elityunjelwe hlobo emva 1900. Ukusukela ngoko, umzila iye yakhula ngumgama 177 miles (285 iikhilomitha) — starting in Pforzheim in the north and ending in Basel in the south.
Mu kuya kwa nshita Mittelweg kunye Ostweg, i Westweg kukuthathela ikakhulu ngenxa entshonalanga zeentaba. Yaye njengokuba uhamba, uya kungqina ukwahlukana endalo inkulu German kwasezantsi entabeni. I ashinyeneyo fir kunye nespruce amahlathi. Le nto inika intaba yobubanzi igama layo, i babeziindleko ukubonakalsa kwi northern Black Forest. amachibi zengxoxo, bonakalayo crests rock, ezigodini glacial, neentaba.
Esiphakathini, uya onokunyuka ziphakamileyo kwakhona. Wena sihamba phezu ithafa Hornisgrinde kuvelela Belchen kunye Hochblauen. Nandipha imboniselo kwi Schliffkopf kwaye zijikeleza YamaSilamsi eliphezulu emhlabeni Hohloh. Ingongoma lokwenyaniso eliphezulu uhambo lwakho, kanjalo, iya kuba ekunyukeni Feldberg. Le ntaba iphezulu Forest Black.
Indlela ukufika Westweg ngololiwe:
Uninzi ukuzolula ukunyuka intaba zingasasazwa phezulu imigama alawulekayo. Kungenxa yokuba kwiilali ezininzi ecaleni bentaba ingaba kufikelelwa kakuhle ngololiwe. Uncedo olukhulu ezinokulungiselelwa amaholo yimephu jikelele simahla isigxina Schwarzwald Tourismus GmbH (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). Ibonisa zonke uloliwe kunye neendlela zebhasi zeKONUS kwingingqi nangaphaya.
Ukwengeza, abahlali abaninzi iingcebiso ekhethekileyo intaba ukhenketho kunye uhambo losuku ngokuba iindwendwe zazo KONUS. Ukuba uceba ukuhlala ixesha elide kunokuba luncedo ukufumana SchwarzwaldCard ngokunjalo. Eli khadi i investment elungileyo xa usebenzisa i izaphulelo eqhagamshelwe ikhadi ngokunzima.
Ukulungele ukuba unxibe iibhutsi zakho ukunyuka intaba uze olichitha nokunyuka indalo? Incwadi uloliwe wakho phakathi imizuzu kunye NO iimali ezongezelelweyo kwi Gcina A Isitimela!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#maphepha #bentaba #Hikingstartingpoints #Iindlela longtrainjourneys trainjourney tips uloliwe